कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन बाहेक के के गर्दैछ ? « Janata Samachar
काठमाडौं । विश्वका २ सय ८ राष्ट्रलाई यतिखेर कोरोना संक्रमणले सताइरहेको छ । चीनको वुहान भएको कोरोनाले इटली र स्पेनलाई विक्षिप्त पारेको छ । पछिल्लोसमय यसले विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई समेत आक्रान्त पारेको छ । कोरोनाको उद्गमस्थल चीनले भने यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरिसकेको छ ।
नेपाल चीनकाे छिमेकी मुलुक भए पनि अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सफल भएको छ । यद्यपि नेपालमा पनि अहिलेसम्म ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये २ जना पूर्ण रुपमा निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किसकेका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । मुलुकमा दुई सातादेखि लकडाउन भइरहेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन बाहेक के के योजना गर्दैछ ? यी लगायतका विषयमा छलफल गर्न जनता टेलिभिजनले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापालाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको जनसंवाद :